Arahabaina nahatratra ny faha 10 taonany ny GV!! · Global Voices teny Malagasy
Arahabaina nahatratra ny faha 10 taonany ny GV!!
MpanoratraJenny Cascante González
Voadika ny 24 Jona 2019 19:37 GMT
Tamin'ny taona 2008 tamin'izay ary nandalo dingana famoronana tena nahafinaritra aho. Efa nanoratra tao amin'ny bilaogiko manokana aho nandritra ny 3 taona ary niara-niasa taminà vondrona mpinamana tao anaty gazetiboky an-tserasera mampiala voly taty aoriana. Indray andro, nilaza tamiko ny namako Juliana Rincon mikasika ity vohikalan'ny fanaovan-gazetin'olon-tsotra ity izay maha-mpikambana azy sy ny tena mahafinaritra aminy raha toa aho ka manapa-kevitra ny hilatsaka an-tsitrapo ho mpanoratra amin'ilay fanorenana ketrika.
Miaiky aho fa toa tena mahaliana ilay sosokevitra ka nekeko avy hatrany, noho izany dia niantso ahy izy nampahafantatra ahy ilay toniandahatsoratro voalohany : Eddie Avila izay nanolotra tamim-pahatsorana ny fampahafantarana rehetra nilaiko mba ahafahako mamoaka lahatsoratra. Nomeny sosokevitra mihitsy aza aho, izay tena nahafinaritra.
Mitondra ny lohateny hoe “Nahazo tamberina tsara ny Sarimihetsika Nasionaly” ny lahatsoratro voalohany izay nivoaka tamin'ny 2 Septambra 2008 ary tsy haiko ny hamaritra izany fahatsapako ny hafaliako izany rehefa nahafantatra fa maro ny olona eran'izao tontolo izao no afaka mahafantatra fa misy ny volavola misandratra momba ny sarimihetsika any Costa Rica noho ny lahatsoratro.
Niverimberina imbetsaka io fahatsapana fientanentanana io taty aoriana, isaky ny tsara vintana mizara vaovao momba ny fireneko aho, ary noho ny fandraisako anjara ato amin'ity vondrom-piarahamonina ity dia afaka nandeha tany Shily aho nanatrika ny Atrikasa Nomerika ho an'ny Tompotany tamin'ny volana Febroary 2011, izay nihaonako tamin'ireo olona mahafinaritra .
Na dia tsy teo nandritra ny fotoana vitsivitsy aza aho an'ny tontolon'ny GV dia manome toky fa hiverina eto indray! satria toerana tsy tiako hialana ny GV. Voninahitra ho ahy ny anisan'ny vondrom-piarahamonina mahafinaritra toa azy. Arahabaina nahatratra ny faha 10 taonany Global Voices <3
13 ora izayEoropa Afovoany & Atsinanana